अष्ट्रेलियामा नयाँ आईफोन लिन करिब २ महिना कुर्नुपर्ने, कति पर्छ मुल्य ?
सिड्नी । विश्वभर प्रतिक्षाको विषय बनेको नयाँ आइफोनका मोडलहरु सार्वजनिक भएका छन् । अमेरिकाबाट सार्वजनिक गरिएका नयाँ संस्करणका आईफोनमा केही नयाँ विशेषता त छन् नै, यसका साथै कम्पनीले आईफोन उत्पादन गरेको दशौं वर्षको अवसर पारेर नयाँ आईफोनको मोडल सार्वजनिक गरेको छ ।
नयाँ आईफोन एक्स
आईफोनको नयाँ मोडल आईफोन एक्सबाट होम बटनलाई पूर्ण रुपमा विस्थापित गरिएको छ । अब यसलाई अनलक गर्न होमबटन थिचिराख्नु नपर्ने भएकाले यसलाई विस्थापित गरिएको हो । यसको सट्टा कम्पनीले फोनमा अनुहार चिन्न सक्ने विशेषता थपेको छ । अब आईफोन अनलक गर्न बटन थिचिराख्नु पर्दैन, केवल अनुहार देखाइदिए पुग्छ ।
त्यस्तै यो फोनको अर्को आकर्षक पक्ष भनेको स्क्रिन हो । यसको एज टु एज स्क्रिनले यो फोनलाई निकै आकर्षक बनाएको छ । यो मोडलमा एप्पलले चारपाटे स्क्रिन हटाएर मोवाईलको सेप अनुसारको सक्रिन राखिएको छ ।
यसमा १२ मेगापिक्जेलको क्यामेरा राखिएको छ भने तीव्र गतिको सेन्सर र कलर सेन्सर राखिएको छ ।
आईफोन ८ को नयाँ विशेषता
आईफोन ८ आईफोन ७ कै परिस्किृत मोडल हो भन्दा फरक नपर्ला । आईफोन ८ को डिजाईनमा केही परिवर्तन गरिएको छैन तर फोनको पछाडीको भागमा भने सिसा जोडेर ७ भन्दा थोरै परिवर्तित देखाउन खोजिएको छ । यो फोन धुलो र पानीले हानी पुर्याउन नसक्नेगरी बनाईएको छ भने यसमा वाएरलेस चार्जिङको व्यवस्था पनि गरिएको छ । एचडी रेटिना स्क्रिन जडित यो फोनमा एक्समा जस्तै १२ मेगापिक्जेलको तीव्र गतिको सेन्सर र कलर सेन्सर सहितको क्यामेरा राखिएको छ ।
एप्पलले यो आईफोनमार्फत आफ्नो नयाँ प्रोसेसर ए ११ बायोनिक सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रोसेसर ए १० भन्दा करिब ७० प्रतिशत तीव्र गतिमा चल्ने दावी गरिएको छ ।
५० दिन कुर्नुपर्ने
नयाँ मोडेलमध्ये आईफोन ८ यही महिनामा अष्ट्रेलियामा सार्वजनिक हुनेछ भने आईफोन एक्स भने करिब ५० दिनपछि मात्र उपलब्ध हुने बताइएको छ । आईफोन ८ का लागि उपभोक्ताले सेप्टेम्बर १५ बाट प्रिअर्डर गर्न सक्नेछन् भने २२ सेप्टेम्बरबाट बजारमा उपलब्ध हुनेछ ।
त्यस्तै आईफोन एक्सका लागि अक्टोबर २७ बाट मात्रै प्रि अर्डर गर्न सकिनेछ भने ३ नोबेम्बरबाट मात्रै सिपिङ सुरु गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
कति पर्छ मुल्य ?
आईफोन ८ र ८ प्लस ६४ र २५६ जिबी स्टोरेज क्षमतामा उपलब्ध हुनेछ जसको मुल्य १०७९ र १२२९ अष्ट्रेलियन डलर पर्नेछ ।
त्यस्तै नयाँ मोडल आईफोन एक्सको मुल्य भने ८ को भन्दा केही महंगो पर्ने भएको छ । एक्सको मुल्य ६४ जिबीको १५७९ र २५६ जिबीको १८२९ अष्ट्रेलियन डलर पर्नेछ ।